Oromiyaa keessatti humni ODP kan aangoo irra jiru irra guddaan – Kichuu
HomeAfaan OromooNewsOromiyaa keessatti humni ODP kan aangoo irra jiru irra guddaan
Oromiyaa keessatti humni ODP kan aangoo irra jiru irra guddaan
Oromiyaa keessatti humni ODP kan aangoo irra jiru irra guddaan worra Caasaa gandummaatiin ijaaramtetu Caffee Oromiyaa keessatti heddummata
Dhimma #Ramaddii_Baajata irraa hubadhaa Yoo Umman Arsii Godina baalee rakkoo fayyaa rakkoo karaa iyyu baajata Maqaa Godina Tokkootiin ramadu, sun kiisha worra jara jala fiiguu bira hin kuttu.
Rakkoon guddaan Oromiyaa keessa jiru karaa hundaan yoo ilaalan #Arsiin_Baalee fi #Diida_aa_Utaa_Waayuu gama Siyaasaa Mootummaa Oromiyaatin hedduu gadi qabiinsi jira.
ammas ittuma jiru.
Baajanni naannoo hundaaf yoo Ramadamu akka worra Caffee Oromiyaa keessatti wol ramadeeti akka Godinoota #Wollaggaati Godina 4 godhani Baajanni Oromiyaa ramadus ta’ee kan Mootummaa Fediraalaa irra guddaan gamas deema garuu umman Rakkoo fayyaa tif Rakkoo adda addaatiin heddummatu Godina Ummata Arsii Baaleetif Godina Harargeeti.
Siyaasa karaa Ummani hin beekkamneen nama Cabsuun akka worra Caffee keessatti heddummatee kana.
Maqaaf nama Godina #Arsii_fi_Baalee ykn #Harargee irraa Tokko Tokko fuudhanii Caffee Oromiyaa jeessa kaaha Ummataan sobu, Garuu isa gadi kan jiru Cufti Oromoo Maqaa Godinoota Wollaggaa irraa dhufanii Caffee Oromiyaa dhuunfachuun Siyaasaa fokkatu.
Ajjeechaan ilmaan Oromoo irratti waraana RIBtiin gaggeeffamu
Yaa Jajjaboo Sabaa, wanti ati barreesite anaaf hingalle. Baajeta Godinootaf kennamuu fi mindaa namoota Caffee Oromiyaa keessa hojjetanii maaltu walitti fide ?
Garuu, ani biyya jiraadhee waa’ee Oromiyaalee yoon beekuu wallaale, Kartaa Federaala Oromiyaa yammuun ilaalu, Kartaa gosa 2n arge. Isa tokko irrati Wallaga Godinoota 2 qaba ( W. Wallaga & E. Wallaga ), kan biraa irrati immoo, Godinoota 4 qaba ( Kellem Wallaga, Western Wallaga, Eastern Wallaga and Horro Guduru ). Egaa kamtu kam akka ta’e na rakkisee waan jiruuf, mee akka gaariitti waan qabatamaa (concrete justification ) dhi’eessimee, uummatis akka hubatutti.
Oromian bateleur ( Risaa Oromiyaa )
An akka dhuunfaatti amma dura waa natti hin mul’annee , garuu fuulduraaf ija qabii qabuun akkaan ilaaluuf yaada wixinee waan kaafteef galatoomi.